बिहानै मोबाइल हेर्नाले बढाउँछ यी रोगहरू ! नियमित रूपमा बिहान के गर्ने ? - Jagaran News Jagaran News
Published On : 12 September, 2020 9:07 am
काठमाडौं , भदौ २७ । अहिलेको समयमा कोही पनि मोबाइल बिना बस्न नसक्ने भइसकेका छन् । मोबाइलले धेरै कुरामा सजिलो बनाए पनि यसको लत पनि बस्दै गएको छ ।